काफ्ले द्वारा बृद्द दम्पत्तिको घर निर्माण गर्न एक्लै तीनलाख सहयोग, कोमल ओलीले गरिन हस्तान्तरण - Ek Jamarko
Home / समाचार / समाज / काफ्ले द्वारा बृद्द दम्पत्तिको घर निर्माण गर्न एक्लै तीनलाख सहयोग, कोमल ओलीले गरिन हस्तान्तरण
काफ्ले द्वारा बृद्द दम्पत्तिको घर निर्माण गर्न एक्लै तीनलाख सहयोग, कोमल ओलीले गरिन हस्तान्तरण
पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका १ हुँगीका युवा इश्वर काफ्ले रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा छन् । तर उनको मन आफ्नो जन्मभुमिमै बढी छ । जसका कारण उनले ब्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा गृह जिल्लामा बिभिन्न अभियानहरु चलाइरहेका छन् । केही महिना अघि उनले आफू जन्मेको गाउँ हुँगीमा एम्वुलेन्स ल्याए । अहिले स्वास्थ्य चौकी मार्फत यस क्षेत्रका जनताले उक्त एम्वुलेन्सको सहयोग लिइरहेका छन् । यति मात्रै हैन । उनले ब्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा जिल्लामा बिभिन्न रचनात्मक सहयोग गर्दै आएका छन् ।
दृष्टिबिहिन बिद्यार्थीका लागि अक्षयकोष स्थापना, ३ सय बढी विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई निशुल्क झोला बितरण लगायतका काम उनी नेतृत्वको संस्थाले हालैमात्र पाल्पामा सम्पन्न गरिसकेको छ । जसमा उनै इश्वरले नेतृत्व गरेको पाल्पाली सेवा समाज दोहाले नेतृत्व गर्दै आएको छ । भुकम्पका बेला राहत संकलन र हस्तान्तरण, मुटु रोगी, मृगौलाका बिरामीहरु सहित जिल्लामा अप्ठेरो परेको बेला इश्वरले सधै हात अगाडि बढाउँदै आएका छन् ।
उनको यो सामाजिक अभियान पाल्पामा मात्र सीमित रहेन । उनको ब्यक्तिगत नेतृत्व र पहलमा घोराही उप महानगर पालिका वडा नं. १२ सिस्नेरी दाङका वृद्ध दम्पती तीर्थराम महरा र रमाकुमारी महराका लागि घर निर्माणको काम समेत युवा समाजसेवी ईश्वर काफ्लेको बिशेष पहलमा सम्पन्न भएको छ । काफ्ले ले उक्त घर निर्माणको लागि एक्लैले तिन लाख रुपैयाको सहयोग गरेका थिए । अत्यन्तै जीर्ण टहरामा जीवन यापन गर्दै आएका ५६ बर्षिय तीर्थराम र ६४ बर्षीय रमा कुमारीका लागि बनाईएको नयाँ घर हालै हस्तान्तरण गरिएको हो ।
बैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशहरुमा बस्दै आएका नेपालीहरुको सहयोगमा दुई कोठे पक्की भवन निर्माण गरि दम्पत्तिलाई उक्त घर हस्तान्तरण गरिएको हो । घरको वृद्धा रमाकुमारी महरा, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ का कार्यवाहक अध्यक्ष सुख चौधरी, एओन टेलिभिजनका प्रवन्धक अमृतमान वली, पत्रकार तथा गीतकार लोकराज अधिकारीले संयुक्त रुपमा जग पुजा गरेर निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
सांसद कोमल ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा समारोह आयोजना गरि उक्त घर बृद्द दम्पत्तिलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । महरा दम्पतीको अवस्था सार्बजनिक गरि घर निर्माणकालागि पहल गर्ने ए वान टेलिभिजनको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा परोपकारी दाताहरुलाई सम्मान गरिएको कुरा प्रबन्ध निर्देशक अमृतमान ओलिले जानकारी दिएका छन ।
काफ्ले द्वारा बृद्द दम्पत्तिको घर निर्माण गर्न एक्लै तीनलाख सहयोग, कोमल ओलीले गरिन हस्तान्तरण Reviewed by Durga Pangeni on अप्रैल 22, 2019 Rating: 5